David Camiron oo ka warbixiyay Socdaalkii Madaxweyne Xassan Sheikh iyo Guulaha ay tiigsatay Dowladda.
Ra�isul wasaaraha Dalka Britain David Camiron, ayaa waxa uu wareysi dhinacyo badan taabanaayo siiyay Wakaaladda Wararka AP, isagoona sheegay in Madaxweynaha dhigiisa ee Somalia Xassan Sheikh Maxamuud ku amaanan yahay Heerka uu ku qaabilay Wufuudii ka qeybgashay Shirkii ka dhacay Magaallo madaxda Britain ee London.
nasro on May 13 2013 ·
Read More · 401 Reads
Dowlada Suudaan oo malaayiin Doolar ku deeqday Soomaaliya
Dowladda Suudaan ayaa Soomaaliya ugu deeqday shan milyan oo Euro si ay qayb uga noqoto dib u soo celinta nidaamkii iyo kala danbeyntii ka jirtay dalka Soomaaliya.
Read More · 303 Reads
Al-shabaab oo si layaab leh uga hadashay Xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho.
Afhayenka kooxda Shabaab Cali Maxamuud Raage ayaa waxa uu si cajiib ah uga hadlay in xirnaansha wadooyinka Muqdisho uu ku sheegay kuwa dan laga leeyahay.
Read More · 592 Reads
Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay qarax ka dhacay mid kamid ah dalalka ugu hor-marsan dunida.
Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), R/wasaaraha xukuumada Federalka Soomaaliya, ayaa waxa uu canbaareeyay weerarkii qaraxa loo adeegsaday ee ka dhacay dalka Turkiga oo kamdi ah dalalka ugu hor marsan dunida isaga oo u tacsiyeeyay madaxda dalkaasi iyo shacabkii eheladoodu wax ku noqdeen.
Read More · 382 Reads
Ururka Horseed oo olalihiisa doorashada ka wada Mudug
Isaga oo meelmarinaya olalihiisa doorashada Urur siyaasadeedka Horseed ayaa waxa uu gobolka Mudug ka wadaa soo xulista musharaxiinta uga qayb galaysa doorashooyinka dowladaha hoose oo 30-June ka dhici doona Puntland.
Read More · 65 Reads
Human rights oo cambaareysay xadgudubyada haweenka Somaliland
Sida ay qortay wakaalada wararka ee AP,deegaanada Maamulka Soomaalilan uu ka arimayo ayaa waxaa ku sii badanaya xadgudubyada loo geysnayo haweenka sida kufsiga.
Read More · 109 Reads
Garoowe oo hubka laga mamnuucay
Taliyaha Qaybta booliska Cabdiraxman Abshir Faarax oo Garowe kula hadlay saxaafada ayaa ka warbixiyey hawlgalo ciidamadu ka sameeyeen magaalada oo ku xoojinayeen amaanka.
Read More · 89 Reads
Xildhibaano ka jawaabay digniin kasoo baxday Puntland
Iyadoo shalay ay ka digtay Puntland mowshin ka dhan ah Xukuumadda Ra�iisul Wasaare Saacid oo ay wadaan Xildhibaanada barlamanka Soomaaliya ayaa Xildhibaanada wada mowshinkaasi waxa ay si kulul uga jawaabeen fariinta Puntland.
Read More · 515 Reads
Madaxweyne Xasan Sheekh oo lacag ku bixiyay Hoteel qaali ah
Wargeyska The Sun oo ka soo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha ku baxay wefdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudada afarta maalmood ah ee ay magaalada London u joogaanka qeybgalka shirka arrimaha Soomaaliya ee London kaasoo ay martigelisay dawlada Ingiriiska.
Read More · 728 Reads
Saraakiisha dowlada ee gobolka Baay oo sheegay iney ku wajahan yihiin degmada Diinsoor
Saraakiisha hogaaminaya ciidamada dowlada Soomaaliya ee dagaalada ka wada gobolka Baay ayaa shaaca ka qaaday iney duullaan ku yihiin degmada Diinsoor ee gobolka Baay oo ah degmada Kaliya ee ka tirsan gobolka Baay ee xiligan ku hartay gacan ku haynta alshabaab.
Mohamed112 on May 13 2013 ·
Read More · 54 Reads
Daawo muuqaalka: Shirkadda Isgarsinta Golis oo casriyeesey adeegyadeedi Isgarsiined soona wada adeegyo cusub
Shirkadda isgarsinta Golis ayaa munaasabad balaaran ku qabatey magaaladda Gaalkacyo munaasabadaasi oo ay shirkaddu ku soo bandhigtey casriyen xiligaan lugu sameyey adeegyo dhor ah oo ay shirkaddu hirgalisay,waxana sidoo kale intaa ay munaasabad ay socotay shirkaddu ay bixisey abaalmarino kala gadisan oo hab nasib ah logu gulesanayey.
Read More · 216 Reads
Page 16 of 726: 1...13141516171819...726
4,487,541 unique visits